पछिल्लो दानियलको हप्ता या अन्त 2015 अन्त अन्त 2016 | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
13 सेप्टेम्बर 2015 मा चर्च हटाइएको थियो र येशू ख्रीष्ट सेप्टेम्बर 2015 धरती गर्न वा 14 वा 15 मा फर्कन थिएन!
बुझ्न, गरेको पल्ट मेरो अघिल्लो ब्लग पोस्ट मा बताउनुभयो अन्त को विश्लेषण गरौं।
हामीलाई मसीहीहरूको लागि, दानियल अन्तिम हप्ता येशू ख्रीष्ट प्रलय सम्म एक हजार वर्षसम्म संसारको शासन गर्न धरती फर्कन हुनेछ जो पछि समय को अन्त, मा समाप्त कि सात वर्षको अवधिमा छ।
सात वर्ष को यो अन्तिम समयमा मानवता सङ्कष्ट बस्नेछन्। तिनीहरूले सजाय र परमेश्वरको क्रोधको दिन देख्न किनभने यी सङ्कष्ट धेरै कठिन समयमा हुनेछ।
येशू ख्रीष्टको फिर्ती प्रसब को दुःखले जस्तै हुनेछ किनभने यी सजाय क्रमिक हुनेछ र हामी दुःखले छन् र प्रसब सम्म हुनेछ झन् सुस्पष्ट भनेर थाह छ।
हामी अन्त मा पृथ्वीमा « मानिस » को जीवन समय को सबैभन्दा कठिन क्षण येशू ख्रीष्टको फिर्ती माथि अग्रणी अन्तिम दिन हुनेछ भनेर बुझ्न।
मेरो अघिल्लो लेख मा म सबै दुःखले भनेर मिति सुरु किनभने अन्त समयमा इस्राएलका राज्य को निर्माण को समयमा मई 14, 1948 थाले कि बताए। इतिहास हामीलाई सम्झाउन र यो साबित गर्न त्यहाँ छ।
निश्चितताका साथ विगत मा एक नजर एक भनेर मिति देखि मानवता को समस्या को worsening जोड हामीलाई अनुमति दिन्छ। यी समस्या, म पनि मेरो व्यक्तिगत ब्लग पोस्ट मा उल्लेख गरेको छ।
अन्तिम बाइबलीय सप्ताह अगमवक्ता भविष्यवाणी थियो कि नोट दानियल केही 600 वर्ष येशू ख्रीष्टको पहिलो आउनुअघि र हामी पहिले नै समय अन्त पूरा गर्नु पर्छ यो सात वर्ष एक वास्तविक अवधि देखेको छ।
म पर्खाल सडक मा शेयर बजार दुर्घटना संग सेप्टेम्बर 29, 2008 सुरु hypothesized।
यो 29 सेप्टेम्बर 2008 को मिति देखि भविष्यवाणीहरूमा र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको पृथ्वीमा फिर्ती को बाइबलीय चेतावनी संकेत बल, magnitudes, तीव्रता को धेरै संग र ठूलो आवृत्ति संग साँचो आउन भनेर स्पष्ट छ।
हामी वैश्विक विनाश निरंतर यो -777.77 प्रसिद्ध संग न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज मूल्य पतन द्वारा सिर्जना गरिएको थियो जहाँ 29 सेप्टेम्बर 2008 को मिति देखि worsened छ यी चिन्हहरू देखि देख्न यो बार को सटीक क्षण मा। म पियरे Jovanovic 777 पुस्तकमा पढ्न तपाईं आमन्त्रण।
हामी सेप्टेम्बर 29 को मिति देखि रूपमा देख्न अतीत मा एक सरल नजर संग, मौसम को 2008 प्रकोप र विपत्तिलाई ग्रह हरेक कुना मा यति असाधारण worsened।
त्यसपछि संसारमा मसीही मान को हानि, extremism मा वृद्धि, र मसीही मानिसहरू विरुद्ध Islamists द्वारा waged एक वास्तविक युद्ध को शुरुवात suffers देखि त्यसैगरि हामी बिस्तारै भनेर बेवास्ता गर्न सक्दैनन्।
2015 लेट आज, स्पष्ट, यो सेप्टेम्बर 29, 2008 देखि, सात वर्ष तब देखि, मानवता धेरै कठिन समय जीवित भनेर स्पष्ट छ। असुरक्षा, गरिबी, हिंसा र युद्ध मान्छे को दैनिक धेरै छन्।
मानवता संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोप सहित धेरै कठिन समयमा जीवित।
हामी पनि विगतमा मा एक नजर संग, 2012 देखि multifaceted एक विश्वयुद्धको भएका छन् कि सबै संकटहरूको, प्रकोप, विपत्तिलाई, हिंसा र द्वन्द्व एक वास्तविक प्रवर्धन छ कि पाउन सक्छन्।
वास्तवमा, मार्च 2012 देखि विश्व युद्ध मा छ। यो पूर्व माध्यम र विशेष गरी संसारको धेरै देशहरू को सेनाहरू लडिरहेका छन् कि सिरियाको छ।
यी सबै तथ्य को दृश्य मा संकेत र बाइबल भविष्यवाणी पूरा हो, म 14 दृश्य सेप्टेम्बर 15, 2015 को लागि येशू ख्रीष्टको एक फिर्ती को संभावना खडा थियो।
स्पष्ट दानियल अन्तिम हप्तामा 29 सेप्टेम्बर 2008 सुरु भएको छ र राम्रो सेप्टेम्बर 29, 2015 द्वारा पूरा भयो …!
यद्यपि हामी सबै मेरो विश्लेषण गर्न विपरीत, येशू ख्रीष्ट फर्के थिएन कि सेप्टेम्बर 2015 को अन्त देखेको छु र आफ्नो चर्च हटाइएको थियो …!
सबै ब्लग पाठकहरूलाई बीचमा त्यो निराशा, म सजग छु र म म निराशा साझेदारी समेत राम्रो बुझ्न!
पक्कै तपाईं पहिले नै थाहा रूपमा म एक अगमवक्ता छैन हुँ र हुन दाबी कहिल्यै गरेका छन्।
तैपनि, पनि एक अगमवक्ता हुनुको बिना, म बल, अठोट र येशू ख्रीष्टको फिर्ती वास्तवमा धेरै नजिक छ भनेर विश्वास संग भन्न सक्छौं।
यो कथन कारण बल, चौडाई, तीव्रता र सबै बाइबलीय भविष्यवाणीहरूको आवृत्ति र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको फिर्ती सबै संकेत संग प्रदर्शन गर्न छ।
तिनीहरूले सेप्टेम्बर 29, 2008 देखि बल, मात्रा र ठूलो आवृत्ति संग, कुनै पनि पक्कै बिना पूरा छन्।
त्यसपछि, तपाईं को प्रत्येक रूपमा, म येशू ख्रीष्टको पूर्व संग युद्ध सहित सबै संकेत र भविष्यवाणीहरू, को उपलब्धि बावजुद, अझै फिर्ता धरती मा छैन भनेर यो छ कसरी आफैलाई सोधें कि सबै मा likelihood आरमागेडोन को युद्ध आफ्नो फिर्ती मा येशू ख्रीष्ट लिन पर्छ भन्ने छ।
म साँच्चै गलत थियो? जाहिर कम्तिमा स्पष्ट हो! केवल परमेश्वरले येशू ख्रीष्टको फिर्ती को दिन र घण्टा थाह देखि यो पनि सामान्य हुनेछ!
म साँच्चै गलत हूँ भने हामी सामना समस्या, हामी विपत्तिलाई र पीडा बुरा प्राप्त हुनेछ भनेर थाह रूपमा हामी सबै क्षेत्रहरु मा पृथ्वीमा बाँच्ने सबै विपत्तिलाई, हामीलाई पर्खिरहेका ती अर्को केही छन् कि छ फेरि र फेरि endlessly हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको फिर्ती सम्म!
अनि त्यसपछि हामी हाम्रो सामु एउटा वास्तविक र गम्भीर समस्या छ भनेर बुझ्न।
म पहिले नै मेरो अघिल्लो लेख मा बताउनुभयो छन् रूपमा, येशू ख्रीष्ट को फिर्ती परमेश्वरले दुःखकष्टलगायत र दुःखले छोटा सक्छ किनभने, मे 14 1948 भयो भनेर पहिलो चिन्ह देखि हरेक दिन उत्पन्न गर्न सक्छ।
समय को अन्त को लागि समय सीमा (हामी पहिले नै, अन्त समयमा पहिलो चिन्हको मिति देखेको रूपमा, मे 14, 1948 जा रहेको छ) 1948 मा जन्मिएका पुस्ता अधिकतम जीवनकालमा छ।
मानिसको अधिकतम जीवन बाइबल मा 120 वर्ष छ यो 2068 हामीलाई दिन्छ।
तर तीव्रता, बल, आकार र उपलब्धिहरू र येशू ख्रीष्टको फिर्ती को भविष्यवाणीहरू heralding संकेत को आवृत्ति दिइएको, हामी यस फिर्ती नजिकै छ भनेर बुझ्न पर्छ।
तर त्यसपछि, म गलत होइन भने, किन ढिलाइ …!
स्थिति को चर्चा र विश्लेषण गरेपछि म एक व्याख्या फेला हुन सक्छ।
मेरो विचार र विश्लेषण पनि हाम्रो भाइ क्लाउडडुमासद्वारा IGNERSKI द्वारा गरे सेप्टेम्बर 13, 2015, को लागि अपहरण को समाचार एक व्याख्या प्रदान गर्न मदत गर्न सक्छ।
हाम्रो भाइ क्लाउडडुमासद्वारा तीन कामहरू समय धेरै अन्त व्याख्या मा उल्लेखनीय काम गरेको छ।म तिमीलाई सबै पढ्न आमन्त्रण।
उहाँले झूटो अगमवक्ता हुनुको उसलाई आरोपित भाइबहिनीहरू द्वारा unjustly वास्तविक lynching भोगे।
र अझै म त्यो किनभने उहाँले योजना बनाएका थिए रूपमा चर्च सेप्टेम्बर 13, 2015 हटाइयो थिएन कि निर्विवाद तथ्य बावजुद भाग मा अझै पनि थियो लाग्छ।
मेरो विचार बुझ्न गरौं,
सेप्टेम्बर 29 थाले कि आर्थिक संकट, 2008 पर्खाल सडक को शेयर बजार दुर्घटना र पछि त्यो अन्त समयमा को संकेत र भविष्यवाणीहरू पूरा दिइएको, स्पष्ट प्रारम्भिक सङ्कष्ट देखिन्छ।
हामी यी सङ्कष्ट सात वर्ष एक अवधि लागि हो र दुई तीन भागहरु र एक आधा प्रत्येक विभाजित थाह छ।
पहिलो प्रश्न म आफैलाई सोधें:
किन बाइबल दुई पटक साढे तीन भन्छन् गर्छ?
दोस्रो भाग पहिलो भन्दा बढी कठिन हुनेछ फेरि उल्लेख।
यो … दुखाइ प्रगतिशील सात वर्ष हुनेछ भन्न सजिलो थियो!
केही बाइबल मा केहि लागि लेखिएको छ, यो यथार्थता दोहरी साढे तीन वर्ष त यति उल्लेख गर्न एक कारण छ।
तीन र आधा वर्ष सेप्टेम्बर 29 पछि, 2008 हामीलाई 29 2012 मार्च र तीन दोस्रो भाग र सेप्टेम्बर 29, 2015 को समाप्त खुसी एक आधा दिन्छ।
सेप्टेम्बर 29, 2015 को मिति बस येशू ख्रीष्टको मण्डली को भाग हटाइने हुन समय सीमा हुन सक्छ।
तर चुनाव थिए गर्नेहरूलाई येशू ख्रीष्टको स्वर्गदूतहरूको गरेर अपहरण को दिन सम्म पृथ्वीमा रहन।
बाइबल दानियल 12 पद 11 मा भन्छन् कि सम्झना:
« देखि उजाड हुनेछ को Abomination स्थापित हुनेछ जब दैनिक बलिदान बन्द हुनेछ क्षण, 1.290 दिन हुनेछ पारित »।
यो 1290 दिन साढे तीन वर्ष वा दोस्रो भाग सङ्कष्ट « महासङ्कष्ट » को 42 महिना
पद 12 मा हामी यस्तो लेखिएको पाउँछौं:
« धन्यको उहाँले waits र 1335 दिनहरुमा सफल जो छ! «
म येशू ख्रीष्टको स्वेच्छा आफ्नो चर्चका चुनाव सदस्य छोडेको छ भनेर विश्वास प्रतीक्षा गर्न धरती मा कि 1335 दिन गरिने (दानियल अध्याय 12 को 12 पदमा रूपमा)।
यो तथ्यलाई, म सेप्टेम्बर 2015. 29 थपिनेछन् गर्न दुई महिना र थप 21 दिन, गलत होइन भने यो हामीलाई दिन्छ डिसेम्बर 20, 2015 हामी सेप्टेम्बर लागि पर्खेको येशू ख्रीष्टको फिर्ती लागि 2015।
हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको शारीरिक फिर्ती आफ्नो चर्च केही हटान द्वारा preceded गर्नुपर्छ।
मेरो दोस्रो विचार:
म पाठमा एक सानो पहिले भन्यो अन्तिम सात वर्ष दुई पटक तीन विभाजित छन् र एक आधा त्यसपछि हामी अवस्थित सक्छ बुझ्न पर्छ भने त, केही केही लागि बाइबल लेखिएको छ तीन दुई समयावधिको र एक आधा बीच मरेको समय।
जो मामला मा मार्च 29, 2012 तर दोस्रो खेल समाप्त योजना रूपमा साढे तीन वर्ष को पहिलो भाग एक सानो पछि सुरु।
जो मामला मा धेरै मिति महासङ्कष्ट को सुरु लागि चयन गर्न सकिन्छ।
दानियल अध्याय 12 को पद 11 मा
1) पोप Benedict XVI को राजीनामा मिति: फेब्रुअरी 28, 2013
: पोप फ्रान्सिस को नियुक्ति को 2) मिति द मार्च 13, 2013
म पनि एक तेस्रो समय रोक्नु:
यो पोप फ्रंकोइस क्रूसमा को बाटो मा presides जहाँ एक: यो शुक्रवार मार्च 29, 2013।
जो मामला मा येशू ख्रीष्टको फिर्ती 2016 को दोस्रो आधा र सायद Rosh Hashanah को 03 र अक्टोबर 4, 2016 को उत्सव को अवसरमा ठाउँ लिन सक्छ।
येशू ख्रीष्टको फिर्ती आफ्नो चर्च केही हटान द्वारा preceded गर्नुपर्छ।
प्रभु येशू ख्रीष्टको फिर्ती 2015 वा लेट 2016 लेट हुन्छ भने फिर्ती समय मा थप ढिला भएको थियो भने परमेश्वरको न्यायलाई को परिमाण कम कठिन हुनेछ किनभने, हामी धेरै खुसी अनुमान गर्न सक्छन्।
यो दुःखले जस्तै, मानवता को Sorrows सम्भावना हुन्छ लागि कुनै, जारी र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको फिर्ती सम्म फेरि बुरा प्राप्त र।
येशू ख्रीष्ट आगामी छैन भने, तब स्पष्ट हामी धेरै अधिक ग्रस्त हुनेछ!
यो त्यसैले प्रार्थना र हाम्रो प्रभु र राजा, येशू ख्रीष्टले आफ्ना मात्र छोरा को धरती गर्न एक शीघ्र फिर्ती अनुमति हाम्रो दुःखकष्टलगायत र दुःखले छोटा परमेश्वरको सोध्न फेरि र फेरि प्रार्थना गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
छुटकाराको समय नजिकै तर अगाडी अन्धकारमा दिन अघि छ।
केवल प्रार्थना, विश्वास र प्रेम अन्तिम अन्धकार हामीलाई मदत गर्नेछ।
राख्न राम्रो हाम्रो विश्वास को ज्वाला lit।
हेर्नुहोस् र हाम्रा प्रभु र राजा येशू ख्रीष्टको आतुर फिर्ती र हाम्रो प्राण हाय लागि प्रार्थना।
हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको फिर्ती को अनमोल दिन को आशा मा घर मा शान्ति, प्रेम र आनन्द।